Maraykanka oo duqeyntii 37aad ka fuliyay sanadkan dalka Soomaaliya
Ciidamada Maraykanka ayaa duqeyntii 37aad ka fuliyay sanadkan deegaano ka mid ah dalka Soomaaliya shalay oo Arbaca ahayd iyadoo ay duqeymahan ay lagu kala qaaday maleeshiyaadka Al-Shababa iyo Daacishta Soomaaliya.
Urur caan ah oo ku taageeray Ilhan Cumar doorashada Maraykanka ee 2020
Urur caan ah oo ka dhisan dalka Maraykanka una dhaqdhaqaaqa horumarka MoveOn ayaa aqoonsigooda ugu horreeya ee taageerada doorashada aqalka Koongareeska Mareykanka ee 2020-ka siiyay Ilhaan Cumar, oo ah gabar muslim ah oo ka tirsan aqalka wakiillada.
Madaxweyne Trump iyo Ilhan Cumar oo markale is dhaafsaday hadalo kulkulul
Madaxweynaha Mareykanka oo eed loo jeediyay.
Dacwad oogaha gaarka ah ee Robert Mueller ayaa xeer ilaaliyaha guud ee dowlada mareykanka u gudbiyay xog u ruurin ku aadan doorkii ay dowlada Ruushka ku lahayd doorashooyinkii dalkaasi ka dhacayay sanadkii 2016’kii.
Muwaaddin Soomaaliyeed oo lagu Maxkamadeynayo Dalka Maraykanka Share Tweet Email Share
Cabdi Yuusuf Xasan, oo ah muwaaddin Soomaaliyeed, ayaa la soo taagay Maxkamad ku taalla Dalka Maraykanka, markii lagu eedeeyay Afduub wariye oo ka dhacay Gaalkacyo January 2012-kii.
Mareykanka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in saddex askari looga dilay duqeyn Al-shabaab ay ku bartilmaameedsadeen horaantii todobaadka saldhigga Balli –Doogle ee gobolka Shabeellaha hoose.
Sarkaal ka tirsan booliska oo lagu dilay Muqdisho.
ida la sheegay koox hubeysan oo watay gaari nooca raaxadda ah ayaa Maanta waxaa ay degmada Hodan ku dileen Sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya.
Trump oo ugu baaqay madaxda sirddoonka inay 'wax soo bartaan'
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay laamaha sirddoonka dalkiisa in aysan waxbo kala socon marka ay timaado arrimaha dalka Iiraan isla markaasna iska foggeeyay khatarta la sheegay inay uga imaaneyso dhinaca Kuuriyada Waqooyi.
Bil kadib, shaqadii Dowladda Mareykanka oo la fasaxay
In kabadan 30 maalmood kadib Donald Trump Madaxweynaha maraykanka ayaa ogolaaday in dib loo fasaxo Shaqadii Dowladda Mareykanka oo oo afar todobaad kabadan xayirneed. Madaxweynaha Mareykanka ayaa xalay sadqdii dhexe saxiixay heshiis ogolaanaya in dib loo furo shaqada dawladda mudo kumeel gaar ah.
Mareykanka oo yareynaya howlgalka uu ka wado Soomaaliya
Milateriga Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu yareeyo doorkiisa Soomaaliya iyo howlgalka duqeymaha ee ka dhanka ah Al-Shabaab, sida uu shaaciyay Telefishinka NBC oo soo xiganayay Saraakiil ka tirsan Mareykanka.
Mareykanka oo sheegay in duqeyn cusub uu ka fuliyay Jubada Hoose
Taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa shaaciyay inuu duqeyn ka fuliyay deegaanka Araare ee Gobolka Jubadda Hoose 3-dii bishan, halkaasoo howlgalo ka wadeen ciidanka xoogga dalka.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka oo cambaareeyay xaaladda deg-degga ah ee Ethiopia
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka , Rex Tillerson, ayaa cambaareeyay xaaladda degdega aha ee ay xukuumadda Itoobiya ku soo rogtay dalkaasi.
Maraykanka oo ugu deeqay gaadiidka aan rasaasta karin dowlada Soomaaliya(Sawiro)
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dowlada Mareykanka ayaa soo gaarsiisay Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya lix gaari oo ah gaadiidka aan xabadaha karin.
Duqeynta Maraykanku ka geystey sanadkan dalka Soomaaliya oo gaartay 34 weerar
Sagal Radio Services • News Report • December 29, 2017
Weerarada duqeynta ah ee uu Maraykanku ku qaaday ururka Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya sanadkan ayaa gaartay 34 weerar halka sanadkii hore ay ka ahayd illaa iyo 13 weerar oo kaliya.
Mareykanka oo sii wadaya duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab sanadaha soo socda
Iyadoo uu sii kordhayo ololaha weerarada cirka ee diyaaradaha Drone ka fulinayaan Soomaaliya, ayaa Waaxda Difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka soo bandhigay qorshaha howl galkooda ee sanadaha soo socda.
Ciyaarihii Qaboobaha ee Soomaalida Mareykanka oo Atlanta ka bilowday (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • November 24, 2017
Ciyaaro iskugu jiro Kubadda Cagta iyo Kolayga oo ay ku tartamayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala socoto illaa Sideed gobol oo Mareykanka ka tirsan iyo ciyaartooydii caanka aheyd ee Soomaaliyeed, ayaa ka bilowday magaalada Atlanta ee xarunta gobolka Georgia.
Mareykanka oo mallaayiin doollar dul dhigay madaxa afar ka mid ah Hogaamiyeyaasha Daacish
Sagal Radio Services • News Report • May 6, 2015
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay abaal marin lacageed oo gaareysa 20-milyan oo doollar cidii keenta macluumaadka afar ka tirsan Hogaamiyeyaasha dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Suuriya.
M/weyne Xasan Sheikh iyo Ban Ki Moon oo New York kaga hadlay arrimaha Soomaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xogayaha Guud QM ee Ban Ki Moon ayaa si wada jir ah u shir gudoomiyay Shir looga hadlayay Arimaha Soomaaliya oo ay ka soo qeyb galeen Madax daneeya Arimaha Soomaaliya kaasi oo ka dhacay Magaalada New York ee dalka Mareykanka,
FBI Mareykanka oo shaacisay in Dhalinyaro Somalia ah oo Dalkeeda ka tagay ay U socdaaleen Suuriya
FBI-da mareykanka ayaa sheegtay iney ogaatay in dhalinyaro Somali ah oo kunool dalka mareykanka gaar ahaan Minnesota ay doonayaan iney usocdaalaan dalka Syria si ay uga barbar dagaalamaan kooxaha islaamiyiinta ah ee Syria kadagaalama.
Mareykanka oo Xarumo Hubka uu ku keydsado ka furanaya magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 7, 2014
Dowlada Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in laba xarumood oo loogu talagalay Keydka Hubka iyo Dayactirka Hubka lagu sameeyo in dhawaan laga sameyay Xarunta Wasaarada Gaashadhiga ee Magaalada Muqdisho.